Haala Yaroo Wajjin Tarkaanfachuun WBOf Injifannoo Dha! – Kichuu
[ July 29, 2021 ] Top US, UN officials head to Ethiopia to press for Tigray aid	World
[ July 29, 2021 ] Violence is at the border between Sudan and Ethiopia.	Africa
HomeAfaan OromooNewsHaala Yaroo Wajjin Tarkaanfachuun WBOf Injifannoo Dha!
Haala Yaroo Wajjin Tarkaanfachuun WBOf Injifannoo Dha!
Dame Boruutiin: Ebla 2, 2019
Waraaqsi Uummatni Oromoo wagga shanan darban utuu wal irraa hin citiin godhe jijjirama guddaa keessa seenee jira. Akkaataa itti haala yaroo hubannuu fi xinxalluu tilmaama fi tuhannaa jabaa nuu irraa barbaada. Haalli uummame keessa tokko mijjawwaa fakkaatee qabsoo bilisummaa Uummata Oromoof xancha kokee qabate kan tahe argame OPDOn aangoo Impaayeera Itoophiyaa qabachuu dha. OPDOn kaayyoo fi akkeeka biyyaa bulchuuf hin ijaaramne. Kan ijaaramtes kan jiraachaa turtes ergaa deemuun qofa. Hojii haaraa dingata itti baate waan gootu walaaltee borcaa jirti. Ofii silaa iyyuu ni baddi Uummata Oromoo fudhatee baduuf deemti.
OPDOf diinni duraa ABO akka tahe namni mamu jira natti hin fakkaatu. Araara Eritreaf sababni duraa duraa ABO achii buqqisuuf.Dhiiga namoota gara kuma dhiba lamaa tahinii jidduu isaanitti dhumeef kan itti gaafatame hin jiru. Hidhatanii biyya Eritrea keessa warra sochaa turan hunduu gara biyyaa hidhanaa isaanii wajjin galanii jiru. Kan hiikatee haa galamu jedhame WBO dhuwwaa dha. Wbon Eritrea keessa ture hiikatee OPDO itti kename. OPDOn waraana kabajaan nagaan qabsoo gochuuf gale kaampii galshitee itti roorisuu fi dorsisuun sammuu isaanii jeeqaa turte. Rakkiinni isaan irra gahe waraana biyya keessa jiru qaqqabuun akka OPDOn WBO biratti shakkamtu godhee jira.
OPDOn nagaan ABO wajjin hojjechuuf fedhii fi akeeka tokko illee hin qabdu. Akka kaayyoo ABO itti Abbaan Biyyummaa Uummata Oromoo filmaata biraaf hin dhiyaatu. Akeekni OPDO immoo Impaayeera Itoophiyaa haaromsanii ijaaruu dha. Isafuu oftuultonni Amhaaraa isheen harkaan lafaa kaaftee of irratti ijaarte harkatti didaan halkanii guyyaa kadhachaa jirti.
Bara kana kan adda tahe tokko qabsoon bilisummaa Uummata Oromoo akka yaroo ABO bu’ureesamee ilmaan nafxanyootaa fi uummata Oromoo jiddutti fuulefataa jira. Ilmaan nafxanyaa lafa abbootiin keenya humnaan nuuf qaban Galaaf dabarsinee hin laanu jedhanii of ijaaraa fi hidhachaa jiru. Bakka danda’anitti uummata keenya irratti waraana bananii gaagama guddaa fidaa jiru. Kana malee liyuu hayiliin isaanii RIB wajjin tahee uummata keenya irratti hammeenya guddaa raawwachaa jira. Kan immoo magaala keessatti mootummaa mataa ishee dhaabbatee uummata keenya mataa irratti fincaa jirti. Akkuma abbootii isaanii har’as Gaalan kun hin galuuf jedhanii maqaa taabotan lafa Oromoo qabachuuf uummata keenya gowwomsuufis yaalaa jiru. Qeerroo fi Qarree Oromoo illee waan gowwomsamuu dand’an natti fakkaatu. Garuu meeshaa isaanii kan taate OPDOtu hojjechaaf jira.
Daballoonni OPDO bilisa baanee jirra yoo jedhan kan mataa isaanii himachaa jiru. Isaan gaafa Wayyaaneef ergamaa turanis uummata Orommo saamuu, hidhuu fi ajjeessuuf bilisa qabu. Har’as akkuma kana. Uummatni Oromoo akkuma kaleessaa saamaamaa, hidhamaa, adamsamaa fi ajjeessamaa jira. Haala kana keessaa bilisa bahuun dirqama. Maqaa Araara Abbootii Gadaa fi Haadha Siiqqeen shirrii qabsoo bilisuummaa Orommoo dhoomsuuf xaxxame jabeennya, beekumsaa fi dandeettii hooggantoota WBO hofkluu danda’uun injifannoo keessaa isa ol’aanaa fi kan duraa ti. Tahu illee dhabbinsa amma kan jechuu hin danda’amne ijaarsa ABO irraan gahee jira. Yaroo ijaarsi ABO kaayyoo bilisummaa dhaabbateef sana akka ganu shirri hooggana ABO irratti marsee dhufu obsaa, beekumsaa fi bishina yaada qabaachuudhaan Haayyu Dureen ABO shirricha mataa isaanii irratti dhoosee jira. Haa tahu malee ol’aanaan ajajaa waraanaa fi siyaasaa ABO Abbootii Gadaa, Haadhaa Siiqqee fi Uummata Oromoof haa laatamuun qaawwa ijaarsa keessatti uumee jira. Haala kanan ABO WBO irraa citee hojii siyaasa akka nagaan socho’ee hin hojjenne dhorkamee akka dhadhaa baqee akka badu gochuuf yaalamaa jira.
Akka yaadame WBOn harka hin laatee hin salphanne. Ijaarsi ABOs hin diigamne. Kanaafu har’as borus OPDOn waraana ABO irratti bante dhaabaa hin jirtu. ABO dogongora kana keessa waan seeneef WBO hoogganuuf rakkinni jira. Nagaan socho’anii qabsawwuuf ayyaana dhabanii jiru. Gara hoogganna waraanatti deebuuf maal akka barbaachisu hin beeku. Abbootiin Gadaa fi Haati Siiqqee WBOf Ajajaaa Waraanaa ol’aanaa laachuuf ni danda’u kan jedhu yaada hin qabu. Duraanuu utuu hin beekiin shira mootummaan OPDO ofaa jiru keessa waann itti fakkaate akka qooda fudhatan natti mul’ata. Ammaa jijjiramni waaraan dhufee hiikaan argamutti WBOn Ajajaa Waraanaa Ol’aanaa dhaabbachuun injifannoo seenaa qabeessa isaa lammaffaa galmeessaa jira. Anaaf Injifannoon inni duraa shiraa sadarkaa guddaan irratti qinda’e gufachiisee utuu hin diigamiin hafuu isaa ti.
Utuu miseensota WBO Obbo Baqalaa Garbaa fi Abba Gadaa duraanii Bayanaa Sanbatoo warra fudhanii galan irraa waan gahaa jiru hin argarre OPDOn dhugumaa nagaa busuu barbaaddi jennee yaaduun keenya ni mala. Garuu amma uummatni Oromoo eenyummaa ishee ifatti argaa jira. Uummatni Oromoo OPDOn eenyu akka taate bareechee beeka. Waan nagaa nuuf fiddi jedhee illee irraa eegachaa jiru. Rakkinni jiru namoota baayyee afuuftuu tahanitu mootummaan kun kan keenya jedhee Uummata Oromoo gowwomsaa jira. Mootummaa kana keessa uummatni kan argate wan tokko hin qabu. Eeyyee Obbo Lammaa fi Kononeel Abiyi Afaan Oromoo dubbatu yaroo baayyee yoo nama nyaachisan agarra. Warri garaa isaaf jiraatu jala deeme haa nyaatu UummatniOromoo bal’aan qee’ee isaa irraa buqqa’ee beelaan dhumaa jira. Biyyaaf waan bu’aa fidu tokko hin jiru. Hojiin Kononeel Abiyi biyya lafaa irraa deemee kadhachuu duwwaa dha. Hojiin Habshaa ittiin beekamu kadhaa, beelaa fi yoo hamaatu immoo dubartoota isaanii warra Arabaatti gurgurachuu dha. Warra safuu fi qaanii hin beeknetu “ganaanaa Itoophiyaa” qabaachuu isaanii nutti hima.
Maaliif”ganaanaa Itoophiyaa” isaanii fudhatanii boola hin seene? Isaan harkatti falamaa hin jirru. Ummatni keenya uummatni nagaa jaalatu maaliif warra kaana wajjin bara baraan gubbachuu qaba? Waan isaan irraa babaadnu tokko hin jiru. Gargar baanee nagaan jiraachuuf humna qabaachuu qabna. WBO hirreen Uummata Oromoo harka kee gallee jira. Waan qabnu maraan isin gargarra, isin hordofna. Uummatni Ormoo Kibaa, Kaabaa, Bahaa, Dhihaa Jidduu Galeessaa isin marasiifata, isin kunisifata isin wajjin wardiyaa dhaabbata. Qabsoon keenya amma bilisummaa ti.
ከሰሜን ድምፅ ተሰማ:የአዲስ አበባ ጉዳይ ህገ መንግስቱን ብቻ በተግባር
Lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Nuunnuu Qumbaa keessatti